Hutano uye Hutano Archives | Utah Pride Center
musha » Utano uye Utano
Directory Category: Utano uye Utano
Ngochani Hutano - Ridza mhere Hutano - Pfungwa - Muviri - Mweya
Icho chokwadi chinosara, homophobia iri mupenyu uye iri mushe munzvimbo dzekuchengetedza hutano kutenderera pasirese, ichisiya zviuru zvevanhu veLBBT vasingakwanise kusada kuvhurika uye kutendeseka nevapi vezvehutano, kazhinji zvichikuvadza hutano hwavo uye hutano.
Chinangwa uye chinangwa cheShoutOutHealth.com ndechekupa nzvimbo yakachengeteka kune chero vanhu veLBBT vanofarira mukana wekupa simba, kusvika pari zvino, kusimudzira uye neruzivo ruzivo nezvehutano muhutano hwakachengeteka, husingazivikanwe, kubva kune vanopa hutano, vanyori uye vamwe vashandi vane hanya nekusimudzira hutano hweGBBT.
GLMA - Vashandi Vehutano Vanofambira Mberi LGBTQ Kuenzana
Kuona hutano kuenzana kwevabonde, ngochani, bisexual, transgender, queer (LGBTQ) uye vese vanhukadzi nevanhurume vashoma (SGM) vanhu, uye kuenzana kweve LGBTQ / SGM vashandi vehutano mumabasa avo nemamiriro ekudzidza.
Kuti ibudirire basa iri, GLMA inoshandisa hunyanzvi hwesainzi yehukama hwayo hwakasiyana siyana kudzidzisa nekufambisa kukurudzira, dzidzo, uye kutsvagisa.
Hutano HweLGBTQIA Bonde Rakachengeteka Gwara